Ndị ọkachamara na CCNA - Akwụkwọ Ajụjụ Ajụjụ - Azịza ya
Ajụjụ Ajụjụ Ajụjụ na Azịza Maka CCNA
CCNA ma ọ bụ "Cisco Certified Network Associate" bụ asambodo dị n'etiti ndị kacha achọ maka CISCO certification n'ụwa dum. E nwere ihe karịrị otu nde ndị ọkachamara CISCO n'ebe ahụ na-arụ ọrụ dị ukwuu nke na-ejighị ngwa ngwa tụlee òtù gụnyere nke MNCs. CISCO bụ nnukwu ụlọ ọrụ IT na nke netwọk na mbara ala ma mee ka akwụkwọ CCNA bụrụ ihe dị oke mkpa ma na-enye nnukwu ụgwọ na uru dị iche iche metụtara ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkachamara CCNA kwadoro, ihe ndị dị n'okpuru ebe a ga-abata mgbe ị na-agba ajụjụ ọnụ gị. Mụta ha na-eburu n'uche ihe mgbaru ọsọ mgbaru ọsọ ịkwadebe nke ọma maka onye ọrụ na-ahụ maka ọrụ na-abịanụ na iji kpochapụ ya n'ụzọ dị irè.
Kedu ihe na-agagharị?
Ntughari bụ ụzọ isi na-ewe Packet site na isi mgbaru ọsọ. Gbanwee bụ ngwaọrụ nke na-ebugharị, nke dabere na adreesị IP mgbọrọgwụ. Switch na-eme usoro a na-awụlikwa elu site na ibiaghachi ebe obibi.
Kedu akụkụ nke Data Link na netwọk?
Nkwado a na-ekwenye na a haziri usoro data n'ụzọ ziri ezi, na-emekọ ihe na-ezighị ezi ma na-eme ka data kwenye na ndabara. Nke a bụ oyi akwa ebe "Ethernet" dị ndụ. Nkọwa Macintosh na Ethernet depụtara na Layer Data Link.
Ntak emi ẹkedọhọde nditịbe ke nsinamurua?
A na-ezube mgbanwe iji gbasaa netwọk n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ndị na-agbanweta bụ ngwaọrụ 2 nke na-emekarị, na-eleba anya na ihu okwu macintosh, n'ihi ya ịgbasa ọsọ ahụ.
Kedu ihe nke netwọk netwọk pụtara?
N'ebe ahụ mgbe ndị ahịa dị iche iche (na-agbanye aka na njedebe nke ọwa netwọk) na-eji ma ọ bụ nwaa iji iji otu nnyefe netwọk ahụ, blockage na-eme, ebe netwọk na-eleghara ịmalite ụdị ndị ahịa dị otú ahụ. Ebe ọ bụ na interface ọsọ ọsọ enweghị oke ohere ijide data ahụ, nke mere ka data daba.
Kedu ọrụ nke akwa ahụ? O nwere ike kewaa netwọk n'ime obere ogbe ma ọ bụ ngalaba?
Ogwe ngwọta nke netwọk ahụ, ebe ọ na-adịghị edozi nha ya. Ọ na-agafe nchịkọta data n'etiti ihe ọ bụla 2 netwọk netwọk na-arụ ọrụ na otu na otu nke otu nkwekọrịta mgbakọ.
CISCO Catalyst ọrụ site na nke LAN gbanwere protocol?
CISCO Catalyst 5000 na-eji "iberibe site" ịgbanwe mgbakọ na usoro. Ntughari site na ngbanwe ga-amalite izipu onu mgbe adọtara adreesị mgbaru ọsọ. Ihe dị iche na nke a ma na-echekwa ma na-aga n'ihu bụ na Store-and-Forward na-emecha mkpọtụ niile tupu izipu ya. Ihe gbasara ụlọ ahịa na ịga n'ihu bu XALUM 2960 na 2960-S
3750-X na 3560-X.
Ebe ọ bụ na enweghi ike ịchọta ihe nchịkọta ederede site na ịchọta nanị adreesị mgbaru ọsọ, Ịmechapu nwere ike imetụta mmegbu netwọk site na izipu ihe ndị rụrụ arụ ma ọ bụ nke a na-ejighị. Akụkụ ndị a dị oke egwu nwere ike ime ka ikuku okwu na-egosi na ngwaọrụ ole na ole na netwọk na-emeghachi na ndepụta ndị a na-adịghị mma n'oge ahụ.
Kedu ọrụ a na-arụ site na sublayer LLC?
Ụlọ ọrụ ma ọ bụ Njikọ Ihe Njikọ Kwadoro bara uru iji nyekwuo ihe ọ bụla ọzọ na ngwa ngwa ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike inye nlekọta nchịkwa iyi site na itinye na ntinye ederede / kwụsị koodu. A pụkwara iji ya mee ihe na ntinye aka maka mmezi nke mmejọ.
Òkè dị aṅaa ka ngwa ngwa na-arụ na netwọk?
Ihe 3 bụ ihe ndị dị ịrịba ama nke ngwa nchekwa ngwa bụ:
Nke a bụ oyi akwa nke na-enye interface n'etiti ahịa na ngwa.
Nke a bụ oyi akwa nke na-enye ohere ịnweta ngwa dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, nchịkwa ozi, nchịkọta weebụ, nchịkọta akwụkwọ na ihe ndị ọzọ.
Iji mekọrịta ma gbanwee ngwa maka ma ahịa ma nkesa.
Kedu ihe dị iche n'etiti IGRP na RIP?
Ọ bụ ezie na IGRP na-enyocha ihe ndị dịka àgwà na-enweghị mgbagha, ikike nnyefe data, jump tally na MTU iji tụgharịa uche ma nyefee netwọk kachasị mma, RIP na-adabere n'ụdị ọnụ ọgụgụ iji mara nke kachasị mma maka netwọk.
Gịnị ka Boot P pụtara?
Ụlọ ọrụ ndị na-enweghị efere ahụ ma jikọtara ya na netwọk ọ bụla nyere na-ebido site na iji mgbakọ Boot P. Ebumnuche ahụ na-anọgide maka "Boot Program". Ndị ọzọ karịa nke a, Boot P na-ejikarị rụọ ọrụ site na ọrụ iji mara adres nke ha, na adreesị IP PC nke PC.
Ndị a bụ ajụjụ ole na ole a pụrụ ịjụ ajụjụ ọnụ. Mee nke a, ajụjụ ndị a nwere ike ịbụ site na isiokwu ọ bụla ị nyochaworo n'ime obi maka akara akwụkwọ CCNA. I kwesiri inwe ihe nile ma tinye uche n'elu ruo ala iji mee ka onu ogugu di. Nke a ga-emekwa ka ị nwee ọganihu.
Ntuziaka 10 Cloud Asambodo Maka 2018